Mozika variété: manana tanjona handeha lavitra ny Lina Gpe | NewsMada
Tovovavikely vao 13 taona monja, manana ny hoaviny eo amin’ny tontolon’ny mozika i Cheung Shan yi Lina, na fantatra amin’ny ilay anarana Lina Gpe. Efa miisa 10 eo ho eo amin’izao ny hirany. Anisan’ny mamorona ny hirany i Serge Razafimandimby avy ao amin’ny Serge Gpe. Miisa 6 ny mandrafitra ny Lina Gpe ankehitriny ka 5 ny mpitendry ary i Lina no mpihira ao anatin’ny tarika. Efa miparitaka any amin’ny Televiziona maro, ohatra, ny hira arahin’ny rindrantsary (clip) mitondra ny lohateny “ Eto am-baravarankely” novelomin’ny Lina Gpe.
Marihina fa sady manao hiran’olon-kafa amin’ny teny malagasy sy amin’ny teny sinoa i Lina, indrindra ireo hira manana ny maha izy azy, kanefa somary efa tsy dia heno na hita any amin’ny haino vaky jery intsony. Manana feo miavaka, mambabo ny mpihaino avy hatrany ny tovovavy eo amin’ny lafin’ny fihirana.
Manana tanjona handeha lavitra eo amin’ny tontolon’ny mozika i Lina Gpe. Efa manomankomana zavatra maro hatolotra ny mpankafy ny kanto malagasy, raha ny filazan’ny mamoronkira sy manajeran’ny Lina gpe, i Serge Razafimandimby. Misokatra amin’ny fiaraha-miasa rehetra ny Lina Gpe ho an’izay liana amin’ny zavatra ataony. Ireny efa hita any amin’ny Televiziona ireny rahateo ny kanto ataony.